China Metal stamping Mugadziri uye Mutengesi | Mestech
Simbi yekudhinda ndeye kushandisa chibhakera uye kufa kuumbika kana kutsemuka simbi isina simbi, simbi, aruminiyamu, mhangura uye mamwe mahwendefa uye zvekunze zvigadzirwa kuti uwane chimwe chimiro uye saizi yechiitiko.
Iyo yekutsika maitiro inogona kukamurwa kuita kupatsanuka maitiro uye kugadzira maitiro (kusanganisira kukotama, kudhirowa uye kugadzira). Iyo nzira yekuparadzanisa ndeyekuparadzanisa iyo yekutsika chikamu uye isina chinhu pamwe neimwe contour mutsetse mune yekutsika maitiro, uye mhando yechikamu chakakamurwa chechikamu chekutsika chinofanira kusangana nezvimwe zvinodiwa; Iyo yekuumba maitiro ndeyekuti iyo yekutsika isina chinhu epurasitiki deformation pasi pemamiriro ekusava nekukuvara, uye kuishandura kuita inodiwa yakapera chigadzirwa chimiro, uye zvakare inosangana nezvinodiwa zvevatariri shiviriro uye zvimwe zvinhu.
* Zvinoenderana neakatsika tembiricha mamiriro, pane nzira mbiri dzekutonhora kutonhora uye kupisa kutsika. Izvi zvinoenderana nesimba, kupurasitiki, ukobvu, dhijitari yedhijitari uye kugona kwemidziyo, uye mamiriro ekutanga ekurapa kupisa uye mamiriro ekupedzisira ebasa rezvinhu anofanirwa kutariswa. 1.Cold stamping simbi yekugadzirisa pane tembiricha yemukamuri, inowanzo shandiswa kune hukobvu hweisingasviki 4mm isina chinhu. Iine zvakanakira pasina kupisa, hapana ganda re oxide, yakanaka yepamusoro mhando, inoshanda mashandiro uye yakaderera mutengo. Izvo zvinokanganisa ndezvekuti kune basa rinoomesa chiitiko, izvo zvinoita kuti simbi irasikirwe nehunyanzvi hwekushanduka. Kukora kweiyo isina chinhu yunifomu uye hapana kukwenya kunodiwa. 2. Kupisa simbi inopiswa kune imwe tembiricha renji. Izvo zvakanakira kuti inogona kubvisa kushushikana kwemukati, kudzivirira kushanda kuomesa, kuwedzera zvinhu zvepurasitiki, kudzora kushomeka kwekushomeka uye kudzora kushandiswa kwesimba kwemidziyo
* Kutsika zvigadzirwa
Simbi yekudhinda inodzivirira mesh
Kwakakurudzira jira yakakomberedzwa
Aluminium yekutsika tireyi
Precision tsikwa simbi mahwendefa
* Zvinhu zvitatu zvakakosha zvekutsika sisitimu yekugadzira: kufa, kudhinda uye jira simbi
1. Kubaya Die Die chinhu chakakosha kufa mukutsika zvigadzirwa. Kune matatu marudzi ekutsika anofa: nyore kufa, kuenderera kufa uye mukomboni kufa.
Die Die yakakosha kufa mukutsika kugadzirwa. Kune matatu marudzi ekutsika anofa: nyore kufa, kuenderera kufa uye mukomboni kufa.
(1) Zvakareruka kufa: yakapusa kufa kufa iyo inongopedzisa kuita kumwe chete mukurova kumwe kwekudhinda. Iyo yakakodzera kune diki batch kugadzirwa kweyakareruka chimiro mativi.
(2) Inoenderera ichifa: mukurohwa kumwe chete kwekudhinda, iyo kufa inopedzisa nzira dzinoverengeka dzekutsika munzvimbo dzakasiyana dzefa panguva imwechete inonzi kuramba ichifa. Kuenderera mberi kufa kunokodzera kugona kwakanyanya otomatiki kugadzirwa.
(3) Mukomboni unofa: mukurohwa, muchikamu chimwe chete chefa kuti upedze matanho akati wandei panguva imwe chete, inozivikanwa senzvimbo inofa. Compound die inokodzera yekutsika zvikamu zvine hombe kuburitsa uye yakanyanya kunyatsoita.
Kuenderera mberi kufa
2. Kubaya muchina
Kutsika kugadzirwa kunowanzo kuve kweplate. Kuburikidza neforoma, inogona kuita kuvhara, kubaya, kugadzira, kudhirowa, kupedzisa, kuvhara kwakanaka, kuumba, riveting uye zvikamu zve extrusion, nezvimwewo, zvinoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana siyana. Semuenzaniso, isu tinoshandisa switch, masokisi, makapu, makabati, ndiro, makesi macomputer, kunyangwe zvombo zvekupotsa pane zvakawanda zvekushandisa izvo zvinogona kugadzirwa nechibhakera kuburikidza neforoma. Kune mhando zhinji dzekubaya michina.
(1) Mechina simba anodhinda Mechiniki chibhakera chakamisikidza sitiroko, chinogadzirika kumhanya uye pasi kugadzirwa. Kunonyanyisa kumhanya 180 nguva / min.
(2) Hydraulic muchina
Iyo hydraulic punch inogona kugadzirisa iyo yekutsika sitiroko kuburikidza neiyo hydraulic vharafu yekuvandudza kugadzirwa. Yekumhanyisa kumhanya inogona kusvika 1000 nguva / min. Izvo zvinokanganisa isimba rekushandisa simba, zvakakwirira zvinodiwa pane zvakatipoteredza uye rinorema rekuchengetedza basa.
(3) Nhamba yekudzora turret punch yekudhinda
Uchishandisa servo mota kutyaira musoro, icho chigadzirwa chiri chakakwirira, kusvika kukana 800 nguva / min. Simba shoma rekushandisa, nyore kugadzirisa uye diki saizi. Naizvozvo, rave kunyatso shandiswa.
Kune yakajairwa jira simbi stamping, mazhinji acho anoshandisa mechiniki chibhakera. Zvinoenderana neyakasiyana mvura inoshandiswa mu hydraulic michina, pane hydraulic michina uye hydraulic michina. Mazhinji acho anoshandisa hydraulic michina, nepo hydraulic michina ichinyanyo shandiswa kune hofori kana yakakosha michina. Nekuda kwekukosha kwayo kwakasarudzika, servo mota punch iri kushandiswa zvakanyanya uye zvakanyanya kuwanda.
Nhamba Dzakadzora Turret Punch Press
Mechina Simba Press
3.Kutsikisa zvinhu Iko kutsika zvinhu zvezvikamu kazhinji ndiro. Izvo zvinhu zvakasarudzirwa chigadzirwa dhizaini zvinosangana nebasa rekuita kwechigadzirwa, senge kuomarara, simba uye kuitisa kwechigadzirwa. Kune rimwe divi, inofanirwa kusangana nezvinodiwa zvepurasitiki, mhando yepamusoro uye ukobvu hwekutsika maitiro. Iyo dhizaini dhizaini yekutsika zvikamu inofanirwa kunyatso kufunga nezve yekutsika maitiro maitiro, kukotamisa nharaunda, kuisa pozi gomba, kurongeka, kudhirowa kudzika, nezvimwe.Mahwendefa anowanzo shandiswa akaderera kabhoni simbi, simbi isina simbi, aruminiyamu, mhangura uye alloys avo, ane epurasitiki uye yakadzika deformation kuramba, uye inokodzera kutonhora kutonhora. (1). Feri simbi: SPCC / SPCD / spce, SECC / SECD / sece, SGCC, sgld, Sus (2). Aluminium chiwanikwa: al1050p, al1100p, al5020 (3). Mhangura chiwanikwa: Pb phosphor bronze, HBS yakasimba simba yendarira (4). Cupro nickel chiwanikwa.
* Surface yekurapa tekinoroji yekutsika zvikamu Mushure mesimbi yakatanga kugadzirwa uye kuumbwa, inoda kugadzirisa iyo simbi pamusoro, kunongedza pamusoro, uye nekuwedzera shanduko yemakanika uye yemuviri uye emakemikari eiyo yesimbi pamusoro. Izvi zvinodaidzwa kunzi pamusoro pesimbi. Chinangwa chesimbi pamusoro pekurapa chakakamurwa muzvikamu zvina:
(3) Yakakosha nzvimbo yezvivakwa
(4) Vandudza michina zvivakwa, zvakadai sekupfeka kuramba, mafuta, nezvimwewo.
* Rudzi rwekurapa kwepamusoro Electroplating (zinc, mhangura, nickel, chromium, goridhe, sirivheri), electrostatic spraying, kupenda kupenda, electrophoresis, silk screen kudhinda, anodizing, blackening, passivation
* Sheet simbi yekudhinda iri nyore kuwana yakanyanya kushanda kugadzirwa kuburikidza nehunyanzvi uye otomatiki nyore kuona mashandiro uye otomatiki neakakwira ekugadzira mashandiro; iyo yekutsika zvikamu zvine chaiyo saizi uye yakanaka kuchinjana; iyo yepamusoro inotsvedzerera uye inotsvedzerera, kazhinji isina michina. Inoshandiswa zvakanyanya mumotokari, mudziyo wemagetsi, chiridzwa, avhiyesheni uye mamwe maindasitiri ekugadzira.
Mestech inokupa iwe nesimbi zvikamu zvidhina zvigadzirwa uye masevhisi. Kana iwe uine chero chaunoda kana kuda kuziva zvakawanda, ndapota taura nesu.
Pashure: Nzira yekusarudza yako jekiseni muforoma mugadziri
Zvadaro: Yemagetsi edzimba dhizaini
Plastic Syringe jekiseni kuumbwa